किताब र विचार
यो लेख एउटा सधैं किताब पढिबस्नेको साधारण कथा हो । किताबहरू पढेका एकाध मेरा अनुभव राख्ने चाहना भएकोले लेखिएको आलेख हो, यो । त्यसो त पढेका किताबहरू अनि विचारहरू अनि त्यो पढ्ने कर्मसँग गाँसिएका अनुभवहरू राखेर लेखहरू लेखिनुका केही अर्थहरू हुन्छन् ।
लामो समयपछि मुलुकले स्थानीयदेखि संघीय तहसम्म स्थायित्वको सरकार पाएको छ । सरकार गठनसँंगै आम नागरिकको अपेक्षा निकै बढेको छ । आम नागरिक दैनिक जीवनयापनका गाँस, बास र रोजगारीका विषयदेखि दुनियाँका अगाडि शिर ठाडो पार्न सक्नेगरी राष्ट्रिय स्वाभिमान सुदृढ भएको देख्न चाहन्छन् ।
मैले आजभन्दा ४५ वर्षअघि केशवराज झालाई चिनेको हुँ, परोक्ष रूपमा । प्रत्यक्ष भने २०३४ सालमा म लोकसेवा आयोगबाट परराष्ट्र छिर्नासाथै एउटै कूटनीतिक सञ्जालमा हामी काम गर्ने भयौं । त्यसबेला झा शाखा अधिकृत हुनुहुन्थ्यो, तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री कृष्णराज अर्यालको पीए हुनुहुन्थ्यो ।
संयुक्त राष्ट्र संघका सातौं महासचिव कोफी अन्नानको आकस्मिक निधनले हामीले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय राजनेता गुमाएका छौं । आकर्षक व्यक्तित्व, मनोहारी व्यवहार र अटल आस्था एवं दृढताका उनी उदाहरण थिए ।
सन् १९५९, जुलाई २४ का दिन मस्कोमा आयोजित ‘अमेरिकन नेसनल एक्जिबिसन’ उद्घाटन कार्यक्रममा तत्कालीन अमेरिकी उपराष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन र सोभियत युनियनका नेता निकिता ख्रुस्चेवबीच रोचक संवाद भयो ।
महिला तथा बालिका यौनजन्य हिंसाले आक्रान्त भइरहेका बेला शिवलिङ्ग र लिङ्गपूजालाई नारी उत्पीडन तथा यौन हिंसासँग जोडेर केही अभिव्यक्ति आए । सामाजिक सञ्जाल तथा केही पत्रिकामा विचारका रूपमा प्रस्तुत यस्ता अभिव्यक्ति आपत्तिजनक मात्र नभएर हास्यास्पद पनि देखिए ।
प्रधानमन्त्रीले प्रदेश सभाहरूमा सम्बोधन गर्दै हिँड्नुको अन्तर्य के हो ? प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलाई बहिष्कार गर्दै हिँड्नु के मुनासिव हो ? यो दुइटै प्रश्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट प्रदेशसभा–२ मा सम्बोधन गरेपश्चात विशेष रूपमा उठ्न थालेको छ । यी दुई प्रश्नका पछाडि दुई मान्यता अडेका छन् ।